သက်တန့်ချို: နော်ဝေးနိုင်ငံရှိ ကမ်းပေါ်တင်နေသော တန်၂၀ လေးသော ငါးအသေများ
နော်ဝေးနိုင်ငံရှိ ကမ်းပေါ်တင်နေသော တန်၂၀ လေးသော ငါးအသေများ
နော်ဝေးနိုင်ငံရှိ ကြမ်းခြေပေါ်မှာ တန် ၂၀ အလေးချိန်ရှိတဲ့ ငါးအသေအုပ်ကြီး လာရောက်သောင်တင်နေမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အပူချိန်ဟာ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာပါတယ် ။ ရေခဲ တွေအရည်ပျော်လာတာနဲ့အမျှ ပင်လယ်သတ္တ၀ါတွေရှားပါးကုန်ကြပါတယ် ။ နော်ဝေးနိုင်ငံ ကမ်းခြေ မြောက် ပိုင်းမှာလည်း ထောင်ပေါင်းများစွာသော ငါးအသေတွေဟာ တကယ်ပဲ နိမိတ် ဆိုးတွေကို ဆောင်ယူလာခဲ့ခြင်းပေလော ။
Nordreisa ရဲ့ Kvaenes ရဲ့ကမ်းခြေမှာ အခုဆို တန်ပေါင်းများစွာသောငါးတွေဟာ ဘာကြောင့် ဒီလိုမျိုး လာရောက်သေဆုံးနေကြရတာပါလဲ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတဲ့ မာယာ လူမျိုးတွေ ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးသတ်ကို တကယ်ပဲ ဆောင်ယူပေးခဲ့ပါပြီလား ။ ပုပ်စော် နံဟောင်နေ တဲ့ငါးအသေတွေကြားမှာ အသက် ၄၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Jan-Petter Jorgensen ဟာ သူ့ရဲ့ခွေးကလေး မော်လီကို ယူဆောင်လို့ ငါးအသေတွေကို လိုက်လံကြည့်ရှုနေပုံဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲတွေးတွေး ဒီလိုရေသတ္တ၀ါတွေ အစု လိုက်အပြုံလိုက် လာရောက်သေဆုံးနေကြခြင်းဟာ ကမ္ဘာကြီးတွက် ကောင်းတဲ့နိမိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ။
သူထင်တာကတော့ “ လူတွေဟာ ဒီလိုအလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးကိုတော့မြင်ဖူးကြမယ်မထင်ပါဘူး ငါးတွေအ များစု ဟာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီး သေဆုံးကြရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ပြီးတော့ သူတို့ဟာ ကမ်းစပ်မှာလာရောက်သေဆုံးကြရတာလား ? ”
တခြား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေသုံးသပ်ပြတာကတော့ မြစ်တစ်ခုထဲမှေ၇ချိုတွေဟာ ပင်လယ်အော်ထဲကို စီးဝင်ခဲ့ တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပြီး မုန်တိုင်းဒါမှမဟုတ် ရေတိမ်ချောက်တစ်ခုခုမှာ ပိတ်မိခဲ့ လို့လည်းဖြစ်နိုင် တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
Jens Christian Holst ဟာ Institute of Marine Research မှ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူကတော့ ငါးတွေဟာ ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်သေဆုံးရတာလားဆိုတာကို အသားစ နမူနာယူပြီး စစ်ဆေးနေ ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
၂၀၁၂ နှစ်စမှာ နော်ဝေးမှာ ငါးတွေ အစုလိုက်သေဆုံးရခြင်းဟာ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်သေးပါဘူး ။ တနင်္ဂနွေနေ့ တုန်းက ငှက်အကောင် ၂၀၀ ခန့်ဟာ ကောင်းကင်ကနေ ထူးဆန်းစွာ မြေပြင်ကို ထိုး စိုက် သေဆုံးမှုဟာ Arkansas မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ် ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ငှက်တွေဟာ မီးခိုးငွေ့ ဒါမှမ ဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ယခုလို ရုတ်တရက်သေဆုံးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းပြော ဆိုကြ ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:02 AM
ဒီမှာနေတဲ့သူတောင်မသိသေးဘူး သက်တန့် ချိုကသိသွားပြန်ပြီ။ သတင်းတွေပြန်ရှာဖတ်ဦးမှ... :)
မဒမ်ကိုး January 9, 2012 at 1:27 PM
နမိတ်တွေလားဘာတွေလားတောင်မသိတော့ပါဘူး ဆရာသက်တန့်ရယ်း(
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) January 9, 2012 at 5:31 PM
ငါးတွေ အများကြီးဘဲ။ ရွှေနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ အားလုံး ငါးပိတွေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာတော့ ဘယ်လို စီစဉ်ကြတယ် မသိ။း)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 9, 2012 at 6:40 PM
တစ်ကယ်ကြီး ဖြစ်လာမှာလားမသိဘူးနော်...ကြောက်စရာ ကြိး..:(
...အလင်းစက်များ January 9, 2012 at 7:01 PM
ငါးတွေ အစုလိုက် စူစိုက် လုပ်ကြတာ နေမှာ Doc ရေ
အလင်းသစ် January 9, 2012 at 10:59 PM
အိုကွယ်... နမိတ်တွေ ဘာတွေတော့ ယုံကြည်လှတယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး.. သေကြမယ် ဆိုရင်လည်း တပြုံတခေါင်းကြီး တူတူသေကြမှာပဲ ဘာကြောက်စရာရှိတုန်း.. ဟီးးးးးးး..ဒါမယ့် ခုလိုမြင်ရ တွေ့ရတာတော့ စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာ။။။။
Anne January 10, 2012 at 5:25 PM
thnx4sharing....:)